KOMYO UAE ၏ ရသစာစုများ
မူလနှစ်ဖြာ၊ သစ္စာနှစ်ခု၊ လေးခုအလွှာ၊ အင်္ဂါတစ်ဆယ့်နှစ်ပါး၊ တရားကိုယ်များနှင့်၊ သုံးပါးအစပ်၊
နှစ်ရပ်မူလ၊ ၀ဋ်သုံးဝနှင့်၊ ကာလသုံးဖြာ၊ ခြင်းရာနှစ်ဆယ်၊ ဤရှစ်သွယ်ကို အလွယ်ကျက်မှတ်
သိစေအပ်သည် သံသရာမှ လွတ်ကြောင်းတည်း။
ဖောက်ပြန်၊ ခံစား၊ မှတ်သား၊ ပြုပြင်၊ သိဝိဥာဏ်၊ ငါးအင်ခန္ဓာမှတ်။
မျက်စိ၊ နား၊ နှာ၊ လျှာ၊ ကိုယ်၊ စိတ်
အဆင်း၊ အသံ၊ အနှံ၊ အရသာ၊ တွေ့ထိစရာ၊ ကြံတွေစရာ
မြင်စိတ်၊ ကြားစိတ်၊ နံစိတ်၊ စားစိတ်၊ ယားနာကောင်းစိတ်၊ တွေးတောစိတ်
မြင်စိတ်၊ ကြားစိတ်၊ နံစိတ်၊ စားစိတ်၊ ယားနာကောင်းစိတ်၊ ( အပြင်ဧည့်သည်ငါးယောက် )
လောဘစိတ်၊ ဒေါသစိတ်၊ မောဟစိတ်၊ အလောဘစိတ်၊ အဒေါသစိတ်၊ တွေးတောစိတ်။ (အတွင်းဧည့်သည်ခြောက်ယောက် )
လေကို ထုတ်သောစိတ်၊ လေကိုသွင်းသောစိတ်၊ ( အိမ်သည်နှစ်ယောက် ) စိတ္တာနုပဿနာ အရှု့ခံတရား (13)ပါး၊
ဥပေက္ခာဝေဒနာ မျက်လုံးမှာပေါ်သည်၊ ဥပေက္ခာဝေဒနာ နားမှာပေါ်သည်၊ ဥပေက္ခာဝေဒနာ နှာခေါင်းမှာပေါ်သည်၊
ဥပေက္ခာဝေဒနာ လျှာမှာပေါ်သည်၊ သုခဝေဒနာ ကိုယ်မှာပေါ်သည်၊ ဒုက္ခဝေဒနာ ကိုယ်မှာပေါ်သည်။ (အပြင်ဧည့်သည် ခြောက်ယောက် )
သောမနဿဝေဒနာ မနောမှာပေါ်သည်၊ ဒေါမနဿဝေဒါနာ မနောမှာပေါ်သည်၊ ဥပေက္ခာဝေဒနာ မနောမှာပေါ်သည်။
(အတွင်းဧည့်သည်သုံးယောက်) ဝေဒနာနုပဿနာ အရှု့ခံတရား (9)ပါး
သမ္မာဒိဌိ၊ သမ္မာသင်္ကပ္ပ၊ သမ္မာဝါယာမ၊ သမ္မာသတိ၊ သမ္မာသမာဓိ၊ သမ္မာဝါစာ၊ သမ္မာကမ္မန္တ၊ သမ္မာအာဇီဝ၊
(လောကုတ္တရာ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး၊ နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရား)
အ၀ိဇ္ဇာနှင့် တဏှာအရင်းခံ ဥပါဒါန်၊ ကံကြောင့်ရုပ်နာမယ်ပေါ်၊ အပင်မှမျိုး၊ မျိုးမှအပင်၊ အမျှင်မပြတ်၊
ဆက်စပ်သည့်ဟန်၊ ကံကြောင့်နာမ်ရုပ်၊ နာမ်ရုပ်ကြောင့်ကံ၊ အဖန်ဖန်ဖြစ်ပြန်နည်းလျော်။ ဗြဟ္မာ သိကြား၊
စည်များက၊ ထင်ရှားပြုပြင်၊ စီရင်ဖန်ဆင်း၊ အကြောင်းရင်းကြောင့်၊ လူနတ်များစွာ၊ သတ္တ၀ါတို့၊ ဖြစ်လာရမှု မဟုတ်ဟု၊ဥာဏ်ဖြင့်ရှု့၍မျှော်။
ဖြစ်ပျက်သမျှ သင်္ခါရ၊ ဒုက္ခသစ္စာမှတ်။ ဖြစ်ပျက်မှု့တွင် ငါကောင်ထင်၊ ခင်မင်သမုဒယမှတ်။ ရုပ်နာမ်အားလုံးဖြစ်ပျက်သုဉ်း၊ ချုပ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်မှတ်။
ချုပ်ဆုံးမှုတွင် ဥာဏ်သက်ဝင်၊ သိမြင်မဂ်ဟုမှတ်။
ယုံကြည်ကျန်းမာ၊ စိတ်ဖြောင့်စွာဖြင့်၊ လွန်စွာအားထုတ်၊ နာမ်နှင့် ရုပ်ကို၊ ဖြစ်ချုပ်ဥာဏ်မြင်၊ ဤငါးအင်၊ မှန်ပင်မဂ်ရကြောင်း။
မစွန့်ကာမ၊ ဆရာမရှိ၊ ၀ီရိယလျော့ အားအင်ပျော့ကာ၊ လွန်စွာယူမှား ဤငါးပါး၊ တရားမဂ်ဖိုလ် ဝေးလေသတည်း။
သူတော်ဆည်းကပ်၊ မြတ်တရားနာ၊ လျှော်စွာအကျင့်၊ မဂ်ဖိုလ်ခွင့်၊ ရလင့်ဧကန်သာ။
ငါသည်မုချသေရမယ်၊ အချိန်ပိုင်းသာလိုတော့သည်.... အားလုံးပဲ စိတ်၏ကျန်းမာခြင်း ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ
Posted by KOMYOUAE at 2:34 AM 1 comment:
HOW TO OPEN GOOGLE INDIA
To open Google India just type www.google.co.in and press enter in the address bar of any web bowser.
If you wish that google should appear the moment you open your internet Explorer then click on the button.
Make Google Your HomePage. A pop-up message will require you to confirm this Click YES.
Posted by KOMYOUAE at 11:07 PM No comments:
1. Click on the Start button to display the start menu.
2. Click on the Controel Panel.
3. In the Control Panel window, Click on the Network and Internet Connections option.
4. Click onInternet Options. The Internet Properties dialog box will appear.
5. Click on the Connections tab.
6. To Set Up Internet connection Click on Set Up ( The new connection Wizard dialog box appears.
8. Click on the Radio button of Connect to the Internet.
10. Click on the Radio button of Set Up My connection Manually.
12. Click on the radio button of Connect usingadial-up modem.
13.Click on the Next button.
14. Type the Name of your internet service provider in the ISP Name box.
16. Click on the Phone number box and type the phone number given by your ISP.
18. Type the User Name.
19. Type the Password.
20. Again Type the Confirm Password of your ISP connection.
21. Click on the Next button.
22. If you want to addashortcut of this connection on your desktop. Click on the check box of Addashortcut to this connection to my desktop.
23. Click on the Finish button to end this wizard .
Posted by KOMYOUAE at 1:31 AM No comments:
3. Click on the Printers and other Hardware option.
4. Click on the Phone and Modem options.
5. Click on the Modems tab
6. Click on the Add button ( Add Hardware Wizard dislog box will appear ).
7. Cick on the Next button ( If the windows could not find your modem, you will see the message. )
9. Select the Manufacturer and Models of modem from the list box. ( If the modem has an installation disc, insert the disc and click on Have Disk instead ).
11. Select the Com port you want to use.
13. When message appears that your modem has been set up successfully, click on Finish button in Add Hrdware Wizard dialog box.
14. The Modem name has been added in the Modems tab of Phone and Modem Options dialog box.
15. To change the setting of the Modem Click on Properties button otherwise click on OK button to finally install the modem and return to Control Panel.
Posted by KOMYOUAE at 12:54 AM No comments:
1. You request to displayaWeb Page on your computer screen.
2. A modem converts the digital signals from the computer into analog signals which are understood by telephone lines.
3. Data request travels through telephone lines toalocal ISP ( Internet service provider ).
4. Data may pass through one or more routers before reaching its final destination.
5. The regional ISP uses lines leased fromatelephone company to send data toanational ISP.
6. A national ISP route data across the country to another national ISP
7. Local ISP / Data moves fromanational ISP and then toalocal ISP and then toadestination server ( In this example, the server that contains the requested Web site ).
8. The server retrieves the requested data (aWeb page ) and sends it back through the internet backbone to your computer.
THE IP addresses are Numbers are of course easy to handle for computers but not for us as humans So the Domain Name System was introduced in 1984.
Posted by KOMYOUAE at 11:30 PM No comments:
THAMUE YELT E
Posted by KOMYOUAE at 9:58 AM No comments:
JOBS OFFER IN UAE
ကုမ္မဏီတွင် လစ်လပ်လျှက်ရှိသော အောက်ပါအရည် အချင်းနှင့်ပြည့်စုံသူ
(၁ )စားသောက်ဆိုင် မန်နေဂျာ...... ကျား( ၁ ) ဦးလစာ = အကြွေးမှတ်ထား ချဲ ပေါက်ရင်ပေးမယ်ပညာအရည်အချင်း = ဘီအီး ( သို့ ) ၀ီစကီ.လုပ်ငန်အတွေ့ အကြုံ = ၀ီစကီ တစ်ပုလင်းအား တစ်ခါထဲ မော့နိုင်ရမည်....ကွန်ပျူတာဖြင့် ဂိမ်းကစားနိုင်ရမည် ။( ၂ )ဧည့်ကြိုဝန်ထမ်း ...မ ( ၂ ) ဦးလစာ = ၂၈၀ ( ဒေါလာမဟုတ်ပါ )ပညာအရည်အချင်း = O.G (သို့ ) LCCI Level X အောင်မြင်ပြီးးလုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံ = ဆိုင်သို့တစ်နေ့ အနည်းဆုံး ဧည့်သည် ၅ ဦး လာအောင်ကြိုဆိုနိုင်ရမည် .မလာ ရင် လာတဲ့နည်းနဲ့ ခေါ်ရမယ် လုံချည်စဖြစ်ဖြင့် အတင်းလိုက်ဆွဲပြီး အတင်းခေါ်သွင်းနိုင်ရမည်...။( ၃ )စာပွဲထိုး .....မ ( ၄ ) ဦးလစာ = ၁၅၀၀ ( ဘတ်)ပညာအရည်ချင်း = အနည်းဆုံး ( ၅ ) တန်းအောင်လုပ်ငန်အတွေ့ အကြုံ = မလုပ်ဖူးလဲ ရတယ်ရုပ်မချောရင် နေပါစေ အသားဖြူပြီး ခြေသလုံးလေး လှရင်တော်ပြီးး တစ်မျိုးမထင်နဲ့ နော် ဆိုင်က စာပွဲထိုးတွေ အားလုံးအတွက် ၀တ်စုံမှာ စကပ်တိုတို ၀တ်ရမှာ ဖြစ်သောကြောင့်...။ဆက်သွယ်ရန်...အမှတ် ( ၀၀၀၀ ) ၊ စီးချင်းတိုက်ပွဲ လမ်းဒေ၀ရက္ခအိမ်ယာ အနီးချင်းပြည်နယ် .. ကော့သောင်းမြို့ ကြောင်ကမ္ဘာ စာသောက် ကုန်လုပ်ငန်းပုံ... ....စာသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ရဲ့ဗစ်စတို အာဏာအား လွှဲပြောင်းရယူထားသူအာပလာ ငကြောင်
Posted by KOMYOUAE at 8:49 AM 1 comment:
ZAWGYI FROM PLANET.COM
BUDDHIST WATCH Latest buddhist News